Indoda yaseGemini kunye noMfazi weScorpio ukuhambelana kwexesha elide - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Indoda yaseGemini kunye noMfazi weScorpio ukuhambelana kwexesha elide
Indoda yaseGemini kunye noMfazi weScorpio ukuhambelana kwexesha elide
Indoda yaseGemini kunye nomfazi weScorpio bayaqondana ngokwengqondo ngakumbi kunayo nayiphi na enye into. Baya kuba nomtsalane kakhulu omnye komnye ukusukela kumhla wokuqala, xa baya kuthetha kwaye baxelele omnye komnye lonke uhlobo lwamabali.
Uphawu lweZodiac ngo-Okthobha wama-20
Uya kuvuya xa ebona indoda enengqondo ecacileyo kwaye ebukhali, kwaye uya kuthanda ukuba unengqibelelo kwaye ucacile malunga nento ayithethayo. Ngamanye amagama, aba babini baya kuba nomdla kubukrelekrele bomnye nomnye, oya kuthi ubenze balibale kancinci malunga necala lenkanuko.
Iikhrayitheriya Isidanga sokuhambelana komfazi waseGemini Man Scorpio
Xa indoda yaseGemini kunye nebhinqa laseScorpio lithandana, kungcono ukuba neqhinga lokubonisa, kuba umfazi weScorpio akanakuchukumiseka lula.
Eli nenekazi lidla ngokubona ngasemva kwiincoko kwaye lizibuze ukuba ngoobani kanye kanye abantu abasemva kwemaski. Uya kufuna ukwenza indoda yaseGemini ibhence wonke umphefumlo wayo, ukuze yazi ukuba ngubani oza kumthanda.
Ukubuya, uya kuba nomdla wokubona ukuba yintoni imfihlelo ejikeleze umfazi weScorpio. Kodwa naye uza koyikiswa nguye.
Aba babini baya kudibana ikakhulu kwiincoko zengqondo kwaye baya kuthanda ukuxoxa ngefilosofi. Uninzi luza kubaxelela ukuba bayekelane kuba bengakulungelanga ubudlelwane. Kodwa baya kuba neenkani ngakumbi kwaye baya kufuna ukubonisa ukungalunganga komntu wonke.
Obu budlelwane apho omabini amaqabane aya kuzama ngako konke okusemandleni ukwenza izinto zibe ntle. Into efana nendoda yaseGemini kunye nomfazi weScorpio kukuba bobabini bayathanda ukudlala imidlalo yengqondo.
Bacinga ngale ndlela kuphela ukuba baya konwaba kwaye babe namaxesha amnandi kunye. Uthanda i-adventure kunye nokufumana izinto ezintsha ngaphezu kwayo nayiphi na into. Akayi kukhathaza esi simo sengqondo kwaye uya kufuna ukujoyina.
Ebhedini, esi sisibini esiza konwaba kakhulu. Uya kufuna ukudlala kwaye azame izinto ezintsha, uya kuba ngaphakathi kwaye ahambe nokuhamba kunye nento ayicebisayo. Into yokuba bayathandana iya kubakhuthaza kakhulu bobabini.
Kuyinyani ukuba kukho iyantlukwano ezimbalwa kubuntu babo. Xa uqala ukujonga ubudlelwane babo, unokucinga ukuba abananto ininzi efanayo. Kodwa kuyamangalisa ukubona ukuba bayavana njani kwaye banakho ukonwaba omnye komnye, nokuba kunzima kangakanani amaxesha.
Indoda yaseGemini iyathanda ukuphuma iyokonwaba nabahlobo, ngelixa umfazi weScorpio engaphezulu kwesizungu efuna ukuhlala.
Unayo kwaye uyayithanda indoda yakhe ukuba ibe naye ngalo lonke ixesha. Kubalulekile ukuba aphumle kancinci, kuba indoda yaseGemini ikuthiyile ukubotshwa.
Inetyhefu yokubeka indoda edlala ngothando kunye nomfazi onomona. Kuya kufuneka alumke kakhulu kuye. Uyakwazi ukuhlaba kakubi ukuba akukho themba nentlonipho phakathi kwabo.
Inyaniso yokuba unomona kangaka inokuba yingozi yokwenene kolu lwalamano. IiScorpios zidume ngokuba nale mvakalelo. Kusenokwenzeka ukuba uya kucinga ngaye ngokungakhathali kwaye engazinzanga.
Ngelixa lo mfazi enika yonke into, kuya kufuneka abe yinxalenye yesibini esiphumeleleyo, ngelixa eqhula kwaye emqhuba. Oku kunokuthetha ukuba ukungqinelana kwabo akukuhle kangako. Baya kuhlala bexabana kwaye bahlukane, kodwa ubuncinci baqinisekile ukuba baya kubuyela omnye komnye.
Xa bexabana, baya kusebenzisa amagama arhabaxa. Umfazi weScorpio angayenzakalisa ngokwenene indoda yaseGemini, ngelixa eya kuqhubeka nokuphikisana kwaye afune igama lokugqibela. Kuya kufuneka alumkele into ayithethayo, kuya kufuneka emamele ngakumbi.
I-Scorpios yaziwa njengeyona miqondiso inyanisekileyo kwaye izinikele. Uvelwano kwaye uziva, lo mfazi kulo mqondiso akanalo nofifi lokuba nobuhlobo okanye ukuba ukuzincama kuthetha ntoni.
Indoda yaseGemini iya kufuna ukuba kuyo yonke indawo. Lo ngumqondiso ongakuqondiyo ukubaluleka kosapho. Xa kuziwa emtshatweni, akakhathali ngokupheleleyo kwaye ukhululekile. Andisathethi ke woyika ukuba uzakutshata, soze aphinde akhululeke.
Uya kuthi enze kwaye enze izinto ezininzi ukwenza ubudlelwane busebenze, akazukungakhathali. Akasokuze ambuze ukuba ebephi na phezolo.
Xa ezakubona ukuba akanamona kwaphela, uya kutyhafa kwaye acinge ukuba akakhathali. Kodwa olu ayilohlobo lomntu onomdla. Unomdla ngakumbi kwimidlalo yengqondo hayi ekubeni ngumlilo.
Xa emnika ama-ultimatums kwaye ephosa umsindo, uya kufuna ukubuyela emva kwaye afumane indawo yokuhlala kubahlobo bakhe.
Umona womfazi weScorpio ungaphezulu kothando. Uneziqendu zobunini, ngakumbi ukuba umbona ekude ngakumbi kunesiqhelo.
Olu luhlobo lomfazi onothando olunzulu nolunomdla kwiqabane. Ubona uthando njengento enzulu kakhulu kwaye uyaziphindezela ukuba wenza impazamo. Xa umfazi weScorpio enomona, lonke ilizwe liya esiphelweni.
Ngexesha labo lokuqala, umfazi weScorpio kunye nendoda yaseGemini baya kuhlala kakuhle. Umbuzo wokuba baya kuba nakho ukulawula umona wakhe kunye nokuchwayita usahleli, nangona kunjalo.
Ufuna inkululeko kwaye angaze alawulwe. Ungayichazanga eyokuba uyathanda ukudlala ngothando, oluya kumdida ngokupheleleyo.
Umtshato awuyi kugcina ubudlelwane phakathi kwendoda yaseGemini kunye nomfazi weScorpio.
Kungangcono ukuba bengatshatanga bade baqiniseke ngeemvakalelo kunye nokunyaniseka komnye nomnye. Kunokuba nzima ukuba indoda yaseGemini inikezele ngobomi bayo bonke kumfazi ongatshatanga kwaye ungaze uphinde udlale ngothando.
Kodwa kukho nenyani yokuba ukuba kukho umfazi owenza le ndoda ihlale, ke loo mfazi ngokuqinisekileyo useScorpio. Xa esiwa ngenxa yakhe, uya kuthakazelelwa bubuhle bakhe kunye nemagnethi. Yonke into ayenzayo iyakuphuma kweli hlabathi kuye.
Ukuba bayatshata, kufuneka aqhubeke nentetho emnandi, kuba uyathanda ukunconywa kwaye aphathwe njengelitye elixabisekileyo. Kubalulekile ukwazisa umfazi weScorpio ukuba ukhethekile.
Ubuntu bakhe kunye nobukrelekrele buya kumenza azive ephantsi ngandlela thile. Umtsalane kuye, eli nenekazi liya kubeka eyona nkangeleko yalo kwaye lizame zonke izijekulo zesini eliphakamise ngalo.
Kodwa uya kudana kakhulu xa ebona ukuba unemfihlo kwaye akafuni ukwabelana nayo yonke into naye. Kungenxa yoko le nto kufuneka evuleleke ngakumbi kunenekazi lakhe.
Ngokukhawuleza bakulungele ukubhengeza uthando lwabo omnye komnye, aba babini baya kuqala ubomi bolonwabo. Iimvakalelo ezinzulu kunye neembono ezahlukeneyo zokubona ubomi ziya kuvela. Ngexesha, baya kukhula babe sesi sibini sihle sineemvakalelo ezinamandla omnye komnye.
Ingcebiso yokugqibela yeNdoda yaseGemini kunye noMfazi weScorpio
Izichasi ziyatsala. Ngokuqinisekileyo oku kunjalo ngendoda yaseGemini kunye nesibini sebhinqa iScorpio, apho umtsalane oqinileyo unendawo yayo. Kodwa zahlukile ngeendlela ezininzi, ke iingxaki zinokubonakala.
Unqwenela ukuziva ekhuselekile kwaye ethandwa ngonaphakade, ufuna inkululeko ngaphezu kwayo nayiphi na into.
Ukuba kunokwenzeka ukuba uyindoda yaseGemini ethandana nebhinqa leScorpio, yiba neentetho ezinomdla nezinzulu naye. Mqinisekise ukuba uzibophelele. Musa ukuthobela abanye abafazi, okanye uya kukrokra.
Ukuba ungumfazi weScorpio othandana nendoda yaseGemini, qiniseka ukuba uyinika yonke indawo ayifunayo.
Ungaze ube nomona, kuba udlala nabanye abafazi kuphela. Le ndoda inokulibala konke malunga neemvakalelo zayo ukuba umntu unzima kakhulu kuye. Ncuma umamele oko akutshoyo.
Ukuba awukwenzi konke oku, uya kubaleka ayokukhangela uthando kwenye indawo. Obu budlelwane apho ubunzima kunye nosizi zinendawo yazo.
Iingxaki aba babini banazo njengesibini zinokusonjululwa ukuba bathatha isigqibo sokuhlala kunye. Le yenye yeendlela abanokuzisa uxolo kunye nemvisiswano ebomini babo.
Umhlaza kunye nokuhambelana kwe-libra ngokwesondo
I-Horoscope ibacebisa ukuba bashiye indawo ethile ukuze ubuntu babo buvele. Ukuba akunjalo, abayi kuvumela iimvakalelo ukuba ziphefumle kwaye zikhule. Kubalulekile ukuba indoda yaseGemini ingadlali malunga nenkazana yayo yeScorpio nangayiphi na indlela.
Ukuba uthatha isigqibo sokuba kunye naye, ke akufuneki acinge ngaye nabani na okanye nantoni na eyenye. Lo mfazi kufuneka abe nezinto azinqwenelayo.
Abadlali beGemini Soulmate: Ngubani uMlingane wabo woBomi bonke?
Ukuhambelana kweGemini kunye ne-Scorpio kuthando, ubudlelwane kunye nesondo
Indoda yaseGemini enezinye iZimpawu
NgoFebruwari 22 Imihla yokuzalwa
Indoda yaseCapricorn kunye neAries Umfazi ukuhambelana ixesha elide
indoda yetaurus kunye nebhinqa legemini
loluphi uphawu lwe-zodiac ngo-Epreli-10
nguwuphi umqondiso okwaziyo 25
ukuhambelana kwehashe kunye nehagu
saturn kwindlu ye-12
ngowuphi umqondiso ngoSeptemba 25
indlela yokukholisa indoda yesikratshi ngesondo